प्रबाश बाट हेर्दा – कांग्रेसका नीति कार्यक्रम कहाँ छन् ? – MeroJilla.com
प्रबाश बाट हेर्दा – कांग्रेसका नीति कार्यक्रम कहाँ छन् ?
स्वीटजरल्याण्ड । चुनाब हुन्छ कि हुन्न भन्ने दुविधाको बिचमा माओबादि केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकारले स्थानीय निकायको निर्बाचन बैशाख ३१ गते नै पहिलो चरणको गराउन सफल भएका छन् । स्थानीय निकायले जनतासँग सबभन्दा नजिक रहेर काम गर्ने हुनेछन । जनतासँग निकटताका कारण स्थानीय निकायलाई स्थानीय सरकार पनि भन्ने गरिन्छ । यस्तो सुवर्ण अवसरमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रको नेतृत्वहरुको इगोका कारण पार्टी तल परेको आम कांग्रेस समथितहरुले आरोप लगाएका छन् ।
२०४८ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुई हजार एक सय ७६ स्थानीय निकायमा जित हात पारेको थियो । मुख्य प्रतिस्पर्धी एमाले संगको चुनाबमा कुल स्थानीय तहको ५५ दशमलव ३४ प्रतिशत हो भने त्यसको ठिक पाँच वर्षपछि २०५४ सालमा भएको निर्वाचनमा एमाले र कांग्रेसको स्थान ठीक उल्टो भएको थियो । यो निर्वाचनमा एमालेले ५९ प्रतिशत स्थानीय निकायको नेतृत्वमा जित हात पार्‍यो भने कांग्रेस २५ प्रतिशतमा खुम्चिन पुग्यो । कांग्रेसको लज्जास्पद हार नै भयो । एउटा कुरा याद के गर्नु पर्ने छ भने यी दुई चुनाबमा जसको सरकार छ उसैले जितेको नै छ । पहिलो स्थानीय निकायको चुनाव हुँदा काँग्रेस सत्तामा थियो भने दोस्रोमा एमाले सत्तामा थियो । अर्थात यी दुई स्थानीय चुनावमा सत्ताशिन पार्टीले नै आफ्नो बर्चस्व देखाएका थिए ।
स्थानीय निकायको चुनाब हुँदा २०४८ मा कांग्रेस , २०५२ मा एमाले पश्चात २०७४ मा नेपाली कांग्रेस सरकारमा नै छ । सरकारमा नै भएपनि किन कांग्रेस पछाडी परेको छ त । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गणतन्त्र स्थापना देखि संबिधान जारि हुने सम्म आम नेपालीहरुको मन जित्न सफल कांग्रेसले स्थानिय निकायमा बहुमतले जित्न सकिन्छ भन्ने मात्र सोच्यो तर त्यो आंकलन अनुसार किन जित हासील गर्न सकेन ? सरकारमा भएपनि दुई खेमा अझ भन्नुपर्दा सिटौला खेमा सहित तिन खेमामा प्रत्यक्ष देखिएका नेतृत्वकर्ताको भागबन्डा स्थानिय निकायको चुनाबमा पनि सजिलै देख्न पाइयो । एकले अर्को गुटलाई सिध्याउने खेलको कारण वडा लगायत नगरपालिका हरुमा झिनो मतको अन्तरले हार बेहोर्नु परेको छ ।
राष्ट्रियता , लोकतन्त्र र समाजबादको मुख्य नारा बनाएर अगाडी बढेको कांग्रेस स्थानिय चुनाबमा सोचेजस्तो नतिजा ल्याउन नसक्नु नेतृत्वमा रहेका नेतृत्वकर्ताहरुको आत्मकेन्द्रीत निर्णयको पराकाष्ठ हावी हुदै जानु अनि पार्टीमा व्यक्ति स्वार्थ मौलाउनु पनि मुख्य समस्या देखिन्छ । वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वमा राष्ट्रिय सोंच राखेर निर्णय लिने क्षमता ह्रास हुँदा लोकतन्त्र प्रति नै नकारात्मक हुदै गएको हो कि ? हामि सबैले बुझेको यहि हो । नेतृत्वमा रहेको गुटबन्दी र स्थानिय निकायको लागि स्थानियतह सम्म परिचित अनि सामाजिक सेवामा निरन्तर लागिपरेका व्यक्तिलाई पाखा लगाएर राम्रो भन्दा हाम्रो भन्दै आफ्नो निकटका लाई टिकट दिने परम्पराले नेपाली कांग्रेस जिल्ला जिल्ला , गाउँ गाउँ, वडा वडा , टोलटोलमा पराजय भोग्नु परेको छ ।
नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान मार्फत समावेशिता, संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको नयाँ संविधान जारि भएदेखि स्थानिय निकायको चुनाब हुने समयसम्म आफुहरुले गरेका कार्यहरुको बिस्तृत जानकारी अहिले सम्म स्थानिय तह सम्म पुर्याउन सकिरहेको छैन । जनतामा काँग्रेसले गरेका राम्रा कामहरूलाई प्रस्टाउने सामर्थ्यको अभाव धेरै नै देखिएको छ । कांग्रेस त्यस्तो पार्टी हो, जसले जहिले पनि देश र जनतालाई मनमुटुमा राखेर काम ग¥यो । राष्ट्रियता लोकतन्त्र र समाजबाद तथा आमजनताका निम्ति गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी कांग्रेसका मुख्य मुद्दा हुन् । उसले यी मुद्दालाई सधैंभरि बोकेर हिँडेको छ । आफुसंग भएका मुख्य मुद्दाहरु पार्टी कार्यालयमा थन्काएर अहिलेको २१ औं सताब्दिमा सर्बश्रेष्ठ हुने सपना देख्न छाडे भैहाल्यो नि । कि हरेक जनताको घर घरमा पुर्याउन सक्नु पर्यो हाम्रा मुख्य मुख्य मुद्दाहरु यस्ता छन् भनेर तर केहि सामर्थ्य रहेन । मतदाताहरूको मनोविज्ञानको संश्लेषण गरेर नयाँ नीति कार्यक्रमहरू ल्याउन नसक्नु पनि कांग्रेस पछाडी पर्नु हो ।
( लेखक नेपाली जनसम्पर्क समिति स्वीटजरल्याण्डका प्रबक्ता समेत हुन् )